Wasiir Sebriye oo sharaxaad ka bixiyey hanaanka loo soo xulayo xildhibaanada ka imaanaya Ahlu-Sunna – Hornafrik Media Network
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa faah faahin guud ka bixiyey heshiiskii ay maanta wada gaareen Ahlu-Sunna Waljamaaca iyo dowladda Dhexe.
Sabriye oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in heshiiskan cusub uu yahay mid muhiim ah, isla markaana soo afjaraya khilaafkii ragaadiyey dhismaha maamul loo dhan yahay oo ay yeelato Galmudug.
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday sida loo soo xulayo 20-ka xildhibaan oo Ahlu-Sunna ay ku yeelaneyso baarlamaanka labaad ee Galmudug, isagoo xusay in si miisaaman oo qaab beeleed ku dhisan loo qeybinayo xildhibaanadaas, Ahlu Sunna-na ay soo xulu doonto, iyadoo la raacayo heshiiskii la gaaray sanadkii 2015-kii.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in hadda xal laga gaaray arrimihii la’isku hayey, isla markaana dhawaan la guda geli doono howlaha soo xulista xildhibaanada cusub, kadibna la aadi doono doorashooyinka xiga.
Waxa kale oo uu intaasi ku daray inay ka go’an tahay, sidii loo dhisi lahaa maamul mid ah oo ay u dhan yihiin beelaha dega gobollada Galgaduud iyo Mudug ee Galmudug.
“Annaga ka wasaarad ahaan waxaa naga go’an in beel walbo waxa ay leedahay ay hesho, deegaankuna uu helo maamul loo dhan yahay.” ayuu yiri wasiir Sebriye .
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo hoggaanka Ahlu-Sunna Waljamaaca ayaa maanta soo kala saaray labo war-saxaafadeed oo is waafaqsan, wasaaradda arimaha gudaha ayaana qoraalkeeda ku sheegtay in dowladda federaalku ay Ahlu-Sunna u ogolaatay inay soo xusho 20 xildhibaan oo qeyb ka ah 89-ka xildhibaan ee uu ka koobnaa doono baarlamaanka labaad ee Galmudug .
Dhenkeeda Ahlu-Sunna oo isla maanta soo saartay war-saxaafadeed kale ayaa sheegtay inay ku qanacsantahay heshiiska ay soo ban dhigtay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya.
Dhinacyada kala ah, xukuumadda federaalka, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug, siyaasiyiin iyowaxgarad kale ayaa si ku mid ah u soo dhaweeyey heshiiska ay maanta wada gaareen xukuumadda federaalka iyo hoggaanka Ahlu-Sunna Waljamaaca.
Khilaaf ragaadiyey howlihii doorashada Galmudug oo marar badan dib u dhacday ku keenay ayaa la aaminsan yahay inuu heshiiskani soo afjari doono.
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Sharci muhiim ah iyo xeerar dhow ah